म अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विजयी नभई सन्यास लिन्न : लुसी ब्रोन्ज – Nepal Press
म अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विजयी नभई सन्यास लिन्न : लुसी ब्रोन्ज
२०७८ साउन ५ गते ११:४०
काठमाडौं । हाल कुनै इङ्लीस फुटबलर लुसी ब्रोन्ज जति उपाधिहरूले सजिएका छैनन्, तर उनका लागि भने यो अझै अपर्याप्त छ । उनको ट्रफी क्याबिनेटमा तीन च्याम्पियन्स लिग उपाधि, ६ लिग च्याम्पियनसीप, पाँच डोमेस्टिक कप छन् ।
गत डिसेम्बरमा फिफा’ज बेस्ट अवार्डमा वर्षको उत्कृष्ट महिला खेलाडीको ताज पनि उनैले पहिरिएकी थिइन् । ब्रोन्ज भन्छिन्, ‘मलाई प्रश्न सोधिने गर्छ, तपाईलाई के कुराले प्रेरणा दिन्छ ? अब सबै कुरा जित्नुभयो ? तर मैले अहिलेसम्म केही जितेको छैन । मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता नजितेसम्म म विश्राम लिने पनि छैन । टोकियो ओलम्पिक मेरो र ग्रेट ब्रिटेनका लागि सुवर्ण अवसर बन्ने छ ।’
आफूले विश्वकप, युरो अथवा स्वर्ण पदक नजितेको उनी बताउँछिन् । अझ उच्चस्तरको विश्वव्यापी सफलता पाउन हरसम्भव कोशिस गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘त्यो प्राप्त नगरेसम्म र शरिरले साथ दिएसम्म खेल जीवनबाट सन्यास लिनेछैन,’ २९ वर्षीया ब्रोन्ज भन्छिन् ।
मैले सधैँ भनेकी छु, म राष्ट्रिय टोलीबाट ट्रफी अथवा स्वर्ण पदक जित्न चाहान्छु र यसकालागि टोकियो ओलम्पिक राम्रो अवसर हो ।
स्वर्ण पदक ‘ग्रेट ब्रिटेन’ फर्किँदै छ
ब्रोन्ज, जसले लिभरपुल, म्यानचेस्टर सिटी र लियोनबाट क्लब फुटबलका कयौं ट्रफीहरू जितेकी छन् । र, सन् २०१९ मा सिविलिभ्स् कप जित्दा इङ्ल्यान्डको टोलीकी सदस्य थिइन् । १८ मध्ये १५ जनाको लियोन्स टोली टोकियो आउँदै छन् । यसले धेरै हदसम्म इङ्लिस फ्लेभर दिनेछ ।
उनले भनिन्, ‘तर, साँचोकुरा इङ्ल्यान्डले खेलेका अन्तिम १४ खेलहरूमा ९ खेल हारेको छ । यस्ले प्रशिक्षक हेगे राइजको ओलम्पिक योजना कस्तो हुन्छ त्यसमा हल्का असर पार्नेछ ।’
ग्रेट ब्रिटेनले उद्घाटन खेल २१ जुलाइमा चिलीसँग सापोरोमा खेल्नेछ । आयोजक जापानसँग २४ जुलाईमा र क्यानाडासँग २७ जुलाईमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
ब्रोन्ज भन्छिन्, ‘दुई स्कटिस किम लिटिल, क्यारोलिन वेर साथै वेल्सकी कप्तान सोफी इङ्गेल टोलीमा हुनुले फरक संस्कृति र गतिशिलता थपेको छ ।’
योसहित ग्रेट ब्रिटेनको महिला फुटबल टोली दोस्रो पटक ओलम्पिकमा सहभागी हुँदैछ । उनीहरू २०१२मा अन्तिम आठ बाट बाहिरिएका थिए । विगतको नतिजाामा टोली कम्जोर देखिएको छ । जाम्बियाविरुद्धको वार्मअप खेल पनि कोरोनाभाइरसका कारण रद्द भयो ।
ब्रोन्जले जिस्किँदै भनिन्, ‘टुर्नामेन्टमा सहभागी हामी मात्र एक टोली हौं, जसलाई पछिल्लो नौ वर्षमा कसैले हराएको छैन । यो नयाँ टोली हुनु हाम्रो लागि फाइदाजनक छ । अन्य धेरैजसो टोलीहरूले भन्न सक्छन् हामीसँग तयारिको लागि धेरै समय थिएन । तर, हामीसँग शीर्ष देश र उत्कृष्ट टोलीबाट खेलेका र राम्रोसँग तयार खेलाडीहरू छन् । जसले गर्दा हमीलाई खेल्न धेरै सहज हुनेछ । हामीले दबाब आफू भित्रैबाट सृजना गरेका छौं, हाम्रो स्वर्ण जित्ने अपेक्षा छ । किनभने हामीसँग खेलाडी र गुणस्तर टोलीमा दुवै छ । इङ्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड र वेल्सले जे गरे पनि हामी फरक वातावरण सिर्जना गर्न एकजुट भएर आएका छौँ ।’
उनले थपिन्, ‘म सोचिरहेकि छु स्वर्ण पदक ग्रेट ब्रिटेन आउँदै छ, यसकालागि अर्को १२ महिना कुर्नु परे पनि मेरो मानसिकता अलिकति पनि परिवर्तन हुनेछैन । हामीले पाएको प्रतिभाहरूले त्यहा जुनसुकै टोलीलाई पनि किन हराउन सक्दैनौं ? यसको कुनै कारण छैन ।’
ब्रोजन जस्तै सबै खेलाडीहरूले परिवार र दर्शकको समर्थनबिना ग्रेट ब्रिटेनका लागि पहिलो महिला फुटबल पदक जित्नुपर्नेछ । उनले भनिन्, ‘त्यो ठूलो कुरा होइन, हामी सकारात्मक पक्षलाई हेर्छौ हामी भाग्यशाली अवस्थामा छौं, ओलम्पिकमा जान पाउनु नै हाम्रालागि ठूलो कुरा हो । हामी ग्रेट ब्रिटेनको प्रतिनिधित्व गर्दैछौं, जुन हामीमध्ये ९०% ले पहिले कहिल्यै गरोका थिएनौं । र ९०% परिवारहरू कहिल्यै यसमा सहभागी थिएनन् ।
‘हामीलाई थाहा छ, ग्रेट ब्रिटेनको समर्थन हाम्रा लागि अमूल्य हुनेछ ।’ ब्रोन्जले लियोनबाट ३ पटक च्याम्पियन्स लिग उपाधि र समग्रमा १४ मुख्य ट्रफि जितेकि छिन् ।
प्रकाशित: २०७८ साउन ५ गते ११:४०